Maxay tahay hadal heynta ugu weyn oo ay maanta hadal haayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Wednesday, June 19th, 2013	Home
Maxay tahay hadal heynta ugu weyn oo ay maanta hadal haayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Number of View :1606Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta waxay hadal haayaan arin ku cusub dhegahooda, waxaadna arkaysaa dad badan oo arintaasi afka ku haaya marka aad joogto meelo ka mid ah goobaha ay shacabka isugu yimaadaan.
Dadka shacabka ah ayaa hadal haaya ciidamo ka socda dalka Ingiriiska oo qaar ka mid ah warbaahinta ay qoreen inay kusoo fool leeyihiin magaalada Muqdisho, si ay uga qeyb qaataan xasilinta amaanka dalka Soomaaliya.
Dadka ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibanaaya arinkaasi, waxaana qaarkood ay kuu sheegayaan in sababta rasmiga ah ee ka dambeeysa arinkaasi ay tahay ka dib markii dalka Soomaaliya ay ka baxday xilligii KMG ahayd, sidaas darteedna caalamka uu hadda Soomaaliya usoo jeestay.
Sidoo kale shacabka ayaa kuu sheegaaya in markaan dalalka reer galbeedka ay aad u daneeynaayaan arinta Soomaaliya, si wax looga qabto marxaladda xilligaan dalka uu maraayo iyadoona Soomaaliyada cusub ay dhawaan dhalatay.
Waxaa hubaal ah in dowladda Ingiriiska ay dhawaan dalka Soomaaliya ka furan doonto safaarad islamarkaana safaaradaasi ay keensan doonto ciidamo gaar ah oo u ilaaliya safaaradooda